Myanmar to Pursue Extension of Tax Waiver for Local Corn | Myanmar Business Today
Home Business Local Myanmar to Pursue Extension of Tax Waiver for Local Corn
Myanmar to Pursue Extension of Tax Waiver for Local Corn
Myanmar plans to sendadelegation to Thailand to negotiate for an extension of tax exemption for corn imports from Myanmar, which runs from February 1 to August 31, according to Myanmar Maize Producers and Exporters Association.
Myanmar has exported 400,000 tons of the commodity to Thailand, which has become an attractive market amid the coronavirus outbreak.
Myawaddy has been chosen as the next corn export route to Thailand. However, following the requirements of the MoU has meant high transportation cost for exporters.
“Now there are no Chinese buyers for our corn, creating pressure for those who buy and store corn with the aim of exporting to China,” said Dr. Thet Hmuu, president of Myanmar Livestock Feed Producers and Distributors Association.
“Ayeyarwady Region is now harvesting corn while supply from southern and northern Shan State is not over yet. There was plenty of stock in warehouses even before the coronavirus breakout. Corn cannot be stored for more than six months or it will spoil due to pests,” he said.
Last fiscal year, Myanmar earned $270 million from exporting1.5 million tons of corn. This year it expects to produce around3million tons, the majority in northern and southern Shan State, Sagaing Region, Magway Region, Chin State, Karen State and Kayah State.
The Livestock Feed Producers and Distributors Association has madeadeal with feed producers to buy 1,000 tons of corn from farmers.
The government, inabid to boost exports, allowed foreign and joint-venture companies to process and export seven items including corn.
Corn price has plunged to K375 per viss from K500-550. (1 viss = 1.632 kg)
ပြောင်းသီးနှံပေါ်သည့်လက်ရှိအချိန်တွင် တရုတ်ဝယ်လက်မရှိသဖြင့် ပြည်တွင်းပို့ ကုန် တင်ပို့သူများက ထိုင်း ဈေးကွက်ကို ပိုမိုအာရုံ စိုက်လာကြောင်း မတ်လ ၁ဝ ရက်က ငါးလုပ် ငန်းအဖွဲ့ချုပ်တွင် ပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ မွေးမြူရေးအစာဖြန့်ဖြူးထုတ်လုပ်ရောင်း ချသူများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာသက်မှူးက ပြောသည်။
ပြည်တွင်းရှိပြောင်းများကို ထွက်ပေါက် တစ်ခုရရှိစေရန် မြဝတီမှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံ သို့တင်ပို့မည့် လမ်းကြောင်းကို ဖော်ဆောင် ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ရန် သဘောတူ ညီမှု ြဥ့ ကို ရေးထိုးခဲ့ပြီး တင်ပို့မှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ကုန်စည်တင်ပို့ သည့် ယာဉ်များမှာ စရိတ်များပြားနေသည့် အခက်အခဲအချို့ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသေးကြောင်း ¤င်းက ပြောသည်။
ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ သြဂုတ် လ ၃၁ ရက်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြောင်း တင်ပို့နိုင်ရန် သဘောတူထားပြီး ကာလတိုး ပြီး တင်ပို့နိုင်ရန် ဆွေးနွေးနေ ကြောင်း သိရ သည်။
ယမန်နှစ်တွင်ပြောင်းတန်ချိန် လေးသိန်း ခုနှစ်သောင်းကျော် ထိုင်းနိုင်ငံသို့တင်ပို့ ထားပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားသည့်ကာလ တွင် ထိုင်းဝယ်လက်ကိုလည်းပိုမိုအာရုံစိုက် လာစရာဖြစ်နေသည်။
ယခင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပြောင်းတင် ပို့မှုတန်ချိန် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၇ဝကျော်ဖိုး တန်ချိန် ၁ ဒသမ ၅ သန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပြောင်းအဓိကစိုက်ပျိုး သည့်နေရာများမှာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် ဖြစ်ပြီး ယခုတစ်နှစ် လုံးပြောင်းတန်ချိန် သုံးသန်းခန့်ထွက်ရှိမည် ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နှစ်ကစတင်ပြီး နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနှင့် နိုင်ငံခြားနှင့်ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများကို ပြည်တွင်း ထုတ်လုပ်သူများ ထံမှဝယ်ယူကာ တဆင့်မြင့် ထုတ်ကုန်တင်ပို့ခွင့်အတွက် ကုန်စည်ခုနှစ် မျိုးကို ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ယင်းကုန်စည်များတွင် ပဲအမျိုးအစားခြောက်မျိုး ၊ နှမ်းအပြင် ပြောင်း သီးနှံတဆင့်မြှင့်တင်ပို့ရန်လည်း ထုတ်ပြန် ထားသည်။
Previous articleNES to Prioritize Rubber, Fishery and Foods from Mon State
Next articleIn Malaysia’s Silicon Valley, Fortunes Flip as Virus Wrecks Trade War Gains